Ngazo zonke izikhathi, abadala emelelwa ukuhlakanipha nokuhlangenwe nakho. Ezandleni zabo, kwadingeka njalo amandla, lapho benikezwa, ngoba imali enkulu yolwazi. Zazifanekisela ekukhulekeleni amasiko abantu kanye namasiko. Umdala - indoda kungaholela empilweni yomphakathi kanye nomnotho we nokho emndenini wesizwe nokuxazulula zonke izingxabano phakathi kwawo. Zonke izimpikiswano balitadishisise futhi saxoxa ke okufakiwe kuze kube uMkhandlu Popular.
Umdala - ke ...
imiphakathi Tribal noma izizwe zinamakhosi emphakathini wabo yabadala owabona imibuzo esivuthayo, ukuxazulula ingxabano eqhamuka phakathi izizwe ezingomakhelwane, kwamaqembu noma imindeni. isizwe Umdala noma umndeni eyayihilelekile ekuxazululweni kwezingxabano e kwezomnotho noma yimuphi omunye imisebenzi yabo ngokuhlanganyela. Futhi lapho kutadishwa isihloko engcono shí umlando wasendulo, lapho ungabona kanjani, emva ukuvela wekuba sive eGreece yasendulo, isigungu samadoda amadala kabusha e-Areyophagu e-Israyeli wasendulo - kuyiSanhedrini, eRoma yasendulo - e iSigele.
Ezweni lethu lesimanje, kwezinye izindawo isesekhona abadala clan, ezifana Chechens, ingush kanye labantu encane Batsbi. abantu Turkic wabiza abaholi babo abadala, okungukuthi, ompunga-bearded darnel.
Futhi nakhu Kuyathandeka: kwezinye amaphalamende European, sisekhona isigungu samadoda amadala, elimalungu alo ekhethiwe kusukela abamele amaqembu aphikisanayo. Kubonakala isimanga, kodwa Bundestag isiJalimane, futhi, unomzimba efanayo. Wayekhona eMbusweni Russian kuze Okthoba Revolution-1917.
UMkhandlu Abadala base-USSR
Nayo ku "Umdala - Ingubani le", kufanele kuphawulwe ukuthi umkhandlu Yabadala futhi wabizwa ngokuthi sokweluleka umzimba usebenza the Supreme Soviet of the USSR. Kuze 1989, wayengabhekiseli kuvikelwe ngokomthetho futhi wasebenza amandla ebekiwe amasiko. isigungu samadoda amadala, ngokuvumelana "Imithetho weCongress of Yabantu amasekela wase-USSR" ngo-December 20, 1989, bamukela siqashelwe ngokomthetho (Isigaba 62).
It yadalwa ngamunye emakamelweni ngokuvumelana quota kuyi-Union Council Yabadala Council kuhlanganisa omunye omele zamaphini, abameleli ababili abavela e-Federal Republic no one - kusukela azimele wodwa, kanye omunye ezifundeni yesifundazwe futhi ezizimele.
Lo msebenzi ukubeka kubo kokwenza isinqumo kwangaphambilini kwi inhlangano nomsebenzi woMkhandlu Ephakeme (isikhathi, ajenda ukusebenza, oda ingxoxo imibiko, njll).
France ekupheleni kwekhulu XVIII
Kodwa eFrance ngo 1795 nguMkhandlu Yabadala wabiza omunye iziNdlu zePhalamende. By the way, wayeselahlekelwe iqedwe Icebo lika ayeba 18 Brumaire (10 November 1799). It phephetha Napoleon Bonaparte lezidumbu kuphatha njengoba uMkhandlu Yabadala kanye oPhethe, anamakhulu mahlanu. Wavuka ukuze amandla futhi wadala uhulumeni omusha.
Ngakho, kudingeka sihlole ngesihloko esithi "Umdala - uyilowo" kwasekuqaleni kubalulekile ukugxila yokuthi abadala akakwazi ukufonela umuntu ongacabangi ukuguga. Ngazo zonke izikhathi, babengabokuqala abameleli engcono bohlobo lwe-, isizwe noma clan, okungase sinikeze iseluleko esihle, ukuxhumanisa ndawonye indaba zangempela futhi isipiliyoni wawoyise. Kuyinto edabukisayo, kodwa ngokuvamile dengwane amathiphu amaningi, bese wathola angafunda ezifanele kakade kusukela ukuphila ngokwakho, okuyinto efundisa kunabo nomfundisi.
Kubhala ulwazi nabaseGibhithe lasendulo. Izigaba zokuthuthukiswa kolimi. Ukuvela of Medicine Science
Ukuzijabulisa okuhle abantwana Irkutsk
Ukuphuza ngokweqile eRussia: kwezimbangela eziyinhloko
Isinyathelo Umbhoshongo Djoser uFaro (isithombe)
Nginga ibele cherry, futhi yini eliningi?
Yokudlela Species, eMoscow. Amakheli the best zokudlela-panoramic
Isidakamizwa "Namathisela i-Teymurova." Ukubuyekeza. Imiyalo
Imvubelo Brewer sika nge-zinc
Medicine "Ftalazol": isitatimende